कवीन्द्रध्वज जोशी | गृहपृष्ठ
Home प्रडक्ट समाचार कवीन्द्रध्वज जोशी
on: १० भाद्र २०६९, आईतवार ००:०० प्रडक्ट समाचार
महाप्रबन्धक, ग्रोमोर मर्चेण्ट बैङ्कर
क्षेत्र विस्तार नगरेसम्म मर्चेण्ट बैङ्करहरूको व्यवसाय राम्रो हुँदैन
शेयर कारोबार हालसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबाट मात्र भइरहेको र नियमनकारी निकायहरू पनि उपत्यकामै रहेकाले हामीलाई उपत्यकाबाहिर जाँदा व्यावहारिक कठिनाइ हुन्छ ।
केही महीनायता रकमका हिसाबले शेयर बजारको दैनिक औसत व्यापार वृद्धि भएको छ । मर्चेण्ट बैङ्करहरूले त्यसबाट कत्तिको लाभ पाएका छन् ?
अहिले विभिन्न बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूलगायत अन्य सङ्घसंस्थाले समेत शेयर बजारमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यसैले, केही महीनायता बजारमा दैनिक औसत व्यापार रकम वृद्धि भएको हो । हालसम्म मर्चेण्ट बैङ्करहरूले केही निश्चित कामहरू जस्तै, निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक, शेयर रजिष्ट्रेशन, प्रत्याभूति सेवा तथा लगानी व्यवस्थापनको कार्य मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यसैले, दैनिक औसत शेयर व्यापार रकम वृद्धि हुँदा सबै मर्चेण्ट बैङ्करहरूले लाभ लिन सक्दैनन् । तर, शेयर रजिष्ट्रेशनको काम गरिरहेका मर्चेण्ट बैङ्करहरूको व्यवसायमा केही वृद्धि भएको छ । मर्चेण्ट बैङ्करहरूले शेयर बजारमा लगानी गर्दा धितोपत्र बोर्डलाई तीन दिनअगावै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो बजार मुद्राबजारपछि छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने अर्को बजार हो । त्यसैले, तीन दिनअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक छ ।
अहिले मर्चेण्ट बैङ्करहरूको व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
स्थापना भएकामध्ये केही मर्चेण्ट बैङ्कर बन्द भए । केही नयाँ कम्पनी पनि आएका छन् । धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएका चारओटा कार्यमध्ये कुनै एक मात्र गर्ने गरी मर्चेण्ट बैङ्करहरू स्थापना हुन सक्छन् र भएका पनि छन् । कतिपय कम्पनीहरू म्युचुअल फण्डसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि स्थापना भएका छन् । जुनसुकै प्रकृतिका भए पनि मर्चेण्ट बैङ्करहरूको व्यवसायको अवस्था खासै सन्तोषजनक छैन । तर, निकट भविष्यमा धितोपत्र बोर्डले मर्चेण्ट बैङ्करहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिदिने आश्वासन दिएको छ । यही कारण नयाँ कम्पनीहरू आएका हुन सक्छन् । क्षेत्र विस्तारका लागि हाम्रो सङ्घले आवश्यक पहल गरिरहेको छ । बोर्डले क्षेत्र विस्तार नगरिदिँदासम्म मर्चेण्ट बैङ्करहरूको भविष्य राम्रो छैन ।
कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै मर्चेण्ट बैङ्कर्स सङ्घ नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष पुगेको थियो । तपाईंहरूको माग के हो ?
हामीले मार्जिन लेण्डिङ, कन्सल्टेन्सी तथा एडभाइजरी सेवा, ब्रोकरेजजस्ता थप कार्यहरू गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं । तर, यस विषयमा बोर्डबाट हालसम्म पनि कुनै सम्बोधन भएको छैन । सो सम्बन्धमा पहल गरिदिन पछिल्लो हप्ता हामीले बोर्डलाई पुनः अनुरोध गरेका छौं । यसपटक बोर्ड सकारात्मक रहेको हाम्रो बुझाइ छ ।
अहिले शेयर प्रत्याभूतिकर्ता नभएर पनि प्राथमिक शेयर निष्कासनमा कमी आएको भनिन्छ नि ?
दोस्रो बजारको कारोबार अवस्थाले प्राथमिक निष्कासनमा असर पार्छ । दोस्रो बजारमै व्यवसाय राम्रो नभएको हुँदा पछिल्लो समयमा प्राथमिक निष्कासन घटेको देखिन्छ । लामो सययदेखि दोस्रो बजार स्थिर हुन सकेको छैन । त्यस्तो हुँदा पनि सर्वसाधारणहरू प्राथमिक निष्कासनतर्फ त्यति विश्वस्त तथा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । नेपालको पूँजीबजारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नै बाहुल्य छ । त्यसो हुँदा प्राथमिक निष्कासन पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूकै बढी हुने गरेको छ ।
हाल समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको अवस्थासमेत सन्तोषजनक छैन । त्यसो हुँदा पनि सर्वसाधारणहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्राथमिक निष्कासनप्रति आकर्षित नभएका हुन सक्छन् । यही कारण प्राथमिक शेयर जारी गर्नुपर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि केही समय कुरिरहेका छन् । भविष्यमा यो क्षेत्रबाहेकका केही म्युचुअल फण्ड स्किम तथा जलविद्युत् कम्पनीहरूका प्राथमिक निष्कासनहरू आउने देखिएको छ । यसले भने सर्वसाधारण र सङ्गठित संस्थाहरूलाई समेत आकर्षित गर्ने देखिन्छ । अहिले शेयर प्रत्याभूतिकर्ता नभएर निष्कासनमा कमी आएजस्तो लाग्दैन । तर पनि बोर्डले तोकिदिएबमोजिमको पूँजी संरचना भने प्रत्याभूतिकर्ता संस्थाका लागि कम भएकाले यसले केही अप्ठ्याराहरू सृजना गरेको छ । त्यसैले, ठूला–ठूला कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासन गर्दा मर्चेण्ट बैङ्करहरूले आपसी समझदारीमा सामूहिक रूपमा प्रत्याभूति सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
कतिपय मर्चेण्ट बैङ्करले लगानी व्यवस्थापकको काम पनि गरिरहेका छन् । अहिले शेयर बजारमा लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
अत्यन्त सीमित मर्चेण्ट बैङ्करहरूले लगानी व्यवस्थापकको काम गरिरहेका छन् । कम्पनीहरूले लगानी व्यवस्थापन गर्दा भने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा लगानीका क्षेत्रहरूको विविधतामा कमी छ । त्यसैले, लगानी व्यवस्थापकको कार्य गर्न मर्चेण्ट बैङ्करहरूलाई कठिनाइ भएको छ । भविष्यमा आउने म्युचुअल फण्डहरूले स्किमहरूमार्फत बजारमा लगानी गर्दा अवश्य पनि लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ । किनभने, लगानीकर्ताले बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दा हुने जोखिमहरू वहन गर्नुपर्दैन । अहिले शेयर बजारमा लगानी गर्ने भने राम्रो समय हो । त्यसैले, पछिल्लो समयमा सङ्गठित संस्थाहरूले समेत शेयर बजारमा लगानी गरेका छन् ।
मर्चेण्ट बैङ्करहरू निक्षेप सङ्ग्रहकर्ता (डीपी)समेत बन्न पाउने भएका छन् । यसले व्यापार विस्तारमा के सहयोग पुग्छ ?
निक्षेप सङ्ग्रहकर्तासमेत बन्न पाउने व्यवस्थाले मर्चेण्ट बैङ्करलाई मात्र नभएर पूँजीबजारसँग सम्बन्धित सबैलाई सहयोग पुग्छ । डीपीले गर्दा शेयर खरीदविक्रीको प्रक्रिया छिटोछरितो हुन्छ । साथै, लगानीकर्ताले लाभांश रकम तथा बोनस शेयर समयमै प्राप्त गर्न सक्छन् । शेयर नामसारी तथा राफसाफको प्रक्रिया छिटोछरितो हुन्छ । शेयर विक्रीकर्ताहरूले समेत समयमै रकम भुक्तानी पाउँछन् । मर्चेण्ट बैङ्करहरूले डीपीको कार्य गर्दा निक्षेप सदस्यहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ । र, त्यसबाट देशभरिका लगानीकर्ताहरूलाई एकै स्थानबाट सेवा प्रदान सकिने भएकाले स्वतः शेयर व्यापारसमेत वृद्धि हुन्छ ।
सबै मर्चेण्ट बैङ्करहरू काठमाडौंकेन्द्रित छन् । उपत्यकाबाहिर व्यवसाय विस्तारको सम्भावना छैन र ?
शेयर बजार विकासका लागि मर्चेण्ट बैङ्करहरू अवश्य पनि भविष्यमा उपत्यकाबाहिर समेत जानुपर्ने हुन्छ । तर, हाल उनीहरूले गरिरहेका सीमित कार्यहरू मात्र गर्न कम्पनीहरू उपत्यकाबाहिर जानु लागतका हिसाबले त्यति औचित्यपूर्ण देखिँदैन । उपत्यकाबाहिर अन्य कम्पनीहरूलाई एजेण्टका रूपमा नियुक्त गरेर डीपीको कार्य गर्न सकिन्छ । लागत एवम् सेवाका हिसाबले यो लगानीकर्ता र मर्चेण्ट बैङ्कर सबैको हितमा हुन्छ । शेयर कारोबार हालसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जबाट मात्र भइरहेको र नियमनकारी निकायहरू पनि उपत्यकामै रहेकाले हामीलाई उपत्यकाबाहिर जाँदा व्यावहारिक कठिनाइ हुन्छ ।